SMM: Tofoka tanteraka amin'ny tsindry atao an'ireo Mpitsara
mardi, 11 juillet 2017 16:41
Tsy nahomby ireo fanairana natao teo aloha, ny filazana an-gazety maro samihafa. Manohy manao izay danin'ny kibony hatrany ireo mpitondra, tsy miraharaha ny didim-pitsarana, manao ramatahora, manindry sy te handidy ny Mpitsara amin'ny didy avoakany. Manginy fotsiny ny fiarovana ny olona efa hita miharihary fa manao ny tsy mety.
Mihamahazo vahana ny fitsaram-bahoaka, satria ataon'ny olona kapoka iray avokoa ireo Mpitsara izay tsy atokisan'ny olona intsony.
Niantso ireo namany ary ny Sendikan'ny mpitsara nanomboka androany hampitsahatra ny asan'izy ireo ka hiditra amin'ny fitokonana.
Nanaraka izany grevy izany avokoa ireo amabaratongam-pitsarana rehetra manerana ny Nosy, hatrany amin'ny toerana farany alavitra toy ny any Ambanja, Morombe, Mandritsara, akaiky an'Antsakabary.
Ny Fitsarana Ambony 6 manerana ny Nosy dia nampiato ny asany avokoa.
Tsy azo lazaina izany fa konokonon'ny biraon'ny SMM na ny Filohany Faniry Ernaivo, araky ny voizin'ny mpitondra fotsiny ity raharaha ity, ka anenjahana ny SMM ho mpanongam-panjakana sy mpanakorontana, fa tofoka tanteraka ireo Mpitsara, ary mampiseho fa miroso amin'ny fanadiovana tanteraka amin'ity raharam-pitsarana ity.
Efa misy tokoa moa ireo vina sy tetika anadiovana izany asam-pitsarana izany fa tsy mety amin'ireo mpitondra izany satria dia matahotra ny ho very fahefana, sy very fihinana ary matahotra ny ho voafatotra ka mety hampigadra sy anenjehana azy ireo mihitsy aza ny halatra sy fanamparam-pahefana ataon'izy ireo.